Uvavanyo lweGlucose, i-Nebulizer enxitywayo, iMeter yeGlucose Meter-e-Linkcare
e-LinkCare, Ukunxibelelanisa ukhathalelo lwe- ubomi obungcono
I-e-LinkCare Meditech Co., Ltd. isekwe liqela leengcali zonyango kunye noonjingalwazi, ijolise kulawulo lwezifo ezinganyangekiyo, ngakumbi i-Asthma, i-COPD kunye ne-Metabolic syndrome esekwe kubuchwephesha obunqabileyo kunye namava eminyaka kwezonyango. iimveliso ezintsha, iinkonzo ezisexesheni ukuzalisekisa iimfuno zabathengi bethu kwihlabathi liphela.
UBUGCISA ® Uthotho
UKUPHEPHA ® Uthotho
UBUGCISA ® Inkqubo yokuHlola eyahlukeneyo (PM900)
UBUGCISA ® Inkqubo yokuBeka iliso kwiPro Pro (PM950)
UBUGCISA ® PM910
UBUGCISA ® Uvavanyo lweHemoglobin Strip (HB)
UBUGCISA ® Uvavanyo lweGlucose yeGlucose Strip (GDH-FAD)
UBUGCISA ® Uvavanyo lweGlucose yeGlucose Strip (UTHIXO)
UKUPHEPHA ® Inkqubo ye-Pro Spirometer (PF680)
UKUPHEPHA ® I-Mesh Nebulizer enxibekayo
UKUPHEPHA ® Inkqubo yoVavanyo loMsebenzi wePulmonary
UKUPHEPHA ® Uhlalutyo lomphunga (BA810)
Kuthunyelwe kumazwe angaphezu kwama-70 kwaye kuyakhula
Kuxhaswe ngaphezulu kwezibhedlele ezingama-5000 + kwihlabathi liphela ngeemveliso zethu kunye neenkonzo
Umenzi wobugcisa kwimveliso yezixhobo zonyango
Ngaphezulu kwe-60% ngoPhando noPhuhliso lobungcali
Ngama-22 + amalungelo awodwa omenzi wechiza
UMboneleli oKhathalelayo lwezeMpilo oPhezulu kuMgangatho woBomi oBhetele
I-e-LinkCare ineqela elizinikeleyo nelinamava labasebenzi ukwenza iR & D, ukuThengisa kunye nokuThengisa, liqela elinomnqweno onamandla wokugcina amanqanaba aphezulu ezinto ezintsha, ulwazi, ubuchwephesha bobuchwephesha, inkonzo ukuze kuziswe izisombululo ezihlanganisiweyo. Sijonge ukwakha ubudlelwane obuluqilima kunye nabathengi bethu kwixabiso lentlonipho nokuthembeka.
I-e-LinkCare inikezelwe ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo sonyango lwesigulana kunye nonyango lwangaphandle kwizifo zokuphefumla, isifo sentliziyo kunye nesifo semetabolism. Ukuza kuthi ga ngoku, uthotho lweemveliso zikulungele ukumiliselwa: 1. Eshukumayo kunye neDesktop Spirometer 2. Inkqubo yoLwazi lokuphefumla 3. I-Mesh Nebulizer enxitywayo
umbono wethu kukubonelela ngomboneleli wehlabathi kwisisombululo sesifo esinganyangekiyo kwicandelo lobungcali kunye nokunakekelwa kwasekhaya.
Iqabane kunye nathi
ngomphathiNgomhla wama-23 ukuya ku-2021
I-e-LinkCare iye kwi-2017 ye-ERS yamazwe ngamazwe ...
I-e-LinkCare iye kwi-2017 ERS yeNgqungquthela yamazwe aphesheya eMilan ERS ikwabizwa ngokuba yi-European Respiratory Society ibibambe i-2017 yayo yamazwe onke eMilan, e-Itali ngoSeptemba. I-ERS y ...
I-e-LinkCare iye kwinkomfa yamazwe aphesheya ye-ERS ...
I-2018 European Respiratory Society International Congress yabanjwa ukusuka nge-15 ukuya kwi-19 kweyoMsintsi 2018, eParis, eFrance ngowona mboniso unefuthe kushishino lokuphefumla; yayiyindawo yokuhlangana yeendwendwe kunye nenxalenye ...
I-e-LinkCare Meditech Co., LTD iye yaya kwiNtlanganiso yoNyaka yama-54 ye-EASD ebibanjelwe eBerlin, eJamani ngomhla we-1 ukuya kowesi-4 ku-Okthobha ka-2018. ...
Umatshini wovavanyo lweSwekile yegazi, 5.2 Igazi leswekile, Iswekile Khangela uMatshini kweyona nkampani, Ikhithi yokuSimahla yeSwekile yeGazi, Ukuzila ukutya kweGazi leShukela 100, IPneumotachograph Spirometer,